Vaovao - Torolàlana momba ny fomba fiasa amin'ny fampidirana jiro sy fanilo tsy misy fipoahana
Torolàlana momba ny fepetra fiasana amin'ny fampidirana jiro sy fanilo tsy misy fipoahana
Birao sy mpaninjara:
Araka ny filazan'ny departemantan'ny orinasa aorian'ny varotra, tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny olana aorian'ny fivarotana ny jiro LED misy fipoahana dia vokatry ny fametrahana tsy mety amin'ny tariby mpampiasa.Noho izany, manazava ny fepetra fiasan'ny orinasa ho an'ny jiro sy tariby LED tsy misy fipoahana izahay.
1. Fiara-in fitaovana singa sy ny tariby fifantenana
Araka ny asehon'ny sary, nanomboka tamin'ny volana aogositra, ny orinasanay dia nohavaozina avokoa ny jiro LED tsy misy fipoahana sy ny fitaovana fampidirana fanilo.
Izy io dia voaforon'ny peratra ivelany sy peratra anatiny.
Aorian'ny fitambarana feno:
Fanamarihana: Ny tsipika miditra amin'ny jiro tsy misy fipoahana dia tokony hampiasa tariby mipetaka PVC na fingotra vita amin'ny fingotra telo-fototra tokana.Voarara tanteraka ny mampiasa tariby tokana tokana na manaisotra ny fonon'ny tariby ary mampiasa tady maromaro hitarika azy amin'ny lavaka tariby.Raha tsy voarakotry ny fiantohana ny olana momba ny kalitao aterak'izany.
Fanamarihana: Tsy mety koa ny mampiasa kasety mba hamehezana ireo tariby telo.
Fampahatsiahivana manokana: Misy fehin-kibo misy lavaka telo eny an-tsena araka ny asehon'ny sary etsy ambany.Ny fenitra GB3836 dia mamaritra fa ny fehin-kibo amin'ny fitaovana fampidirana dia tokony ho fehin-kibo misy lavaka tokana.Noho izany, ny fehikibo fingotra 3-hole dia tsy mahafeno ny fepetra ary tsy azo ampiasaina.
2. Compression visy sy ny fomba fametrahana tariby anatiny
Aorian'ny fametrahana marina dia mila mandinika ireto teboka 3 manaraka ireto ianao:
1. Ny visy fanerena dia tsy maintsy henjana mba hahazoana antoka fa ny tariby dia tsy azo sintonina sy voaisy tombo-kase;
2. Ny tariby anatiny dia tokony handalo ny peratra famehezana fingotra mihoatra ny 5mm ary avy eo manala ny hoditra ivelany ho an'ny fametrahana;
3. Tsy azo atao ny manary ny peratra famehezana amin'ny sitrapony na manolo ny peratra famehezana porous tsy misy fanomezan-dàlana.
Fahatelo, ny fampiasana tsara ny peratra famehezana
1. Rehefa ≤10mm ny savaivony ivelany amin'ny tariby, azafady mba tazomy ny tanany anatiny amin'ny peratra famehezana (araka ny aseho amin'ny sary (1));
2. Rehefa 10mm
3. Raha mihoatra ny 13.5mm ny savaivony ivelany amin'ny tariby, azafady manolo ny tariby (manaisotra ny fiadiana) na mampiasa boaty fampitaovana ho an'ny tetezamita.
Ny voalaza etsy ambony dia ny famaritana ny fampandehanana ny fampidirana ireo jiro sy fanilo tsy mipoaka.Ny olana momba ny kalitao vokatry ny fandidiana tsy mifanaraka amin'ity fepetra ity dia tsy ho voarakotry ny fiantohana.